Kanada .. Trudeau ayaa ku guuleystey xilli labaad, in kasta oo xisbigiisu uu lumiyay aqlabiyadda – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Kanada .. Trudeau ayaa ku guuleystey xilli labaad, in kasta oo xisbigiisu...
Kanada .. Trudeau ayaa ku guuleystey xilli labaad, in kasta oo xisbigiisu uu lumiyay aqlabiyadda
Raiisel wasaaraha Kanada Justin Trudeau ayaa isu diyaarinaya inuu mar labaad u guuleysto doorashadii guud ee Canada ee Isniinta, in kasta oo uu lumiyay aqlabiyadda laakiin si lama filaan ah uu ku gaadhay natiijooyin xoog leh inkasta oo ay jiraan fadeexado isdaba joog ah oo daciifiyay sumcadiisa iyo sumcadiisa xorta ah.
Trudeau wuxuu sheegay in reer Kanada ay diideen kala qeybinta iyo dhaqan galinta ayna doorteen ajande horumar leh.
Xisbiga Libaraalka ee Trudeau ayaa la filayay inuu ku guuleysto tirada ugu badan ee kuraasta baarlamaanka, isaga oo siinaya fursadda ugu wanaagsan ee uu ku soo dhisi karo dowlad. Si kastaba ha noqotee, xorriyaddu waxay ku guul darreysteen inay gaaraan aqlabiyad, taasoo la micno ah inay ahayd inay ku tiirsanaadaan xisbi mucaarad ah inay xukunka sii hayaan.
Tiro ka mid ah telefishanada Kanada ayaa ku qiyaasay in xisbiga Libaraalka, oo uu hogaaminayo Trudeau, ay ku guuleysan doonaan doorashooyinka federaalka ayna awoodi doonaan inay soo dhisaan dowladda soo socota.
Marka loo eego telefishanka TVA iyo CTV, xisbiga Libaraalku wuxuu yeelan doonaa 139 ka mid ah 338 kursi ee baarlamaanka Ottawa, waxaa raacaya Andrew Cher’s Conservative oo leh 99, taasoo la micno ah in xisbiga Libaraalku uu awoodi doono inuu soo dhiso xukuumad laga tiro badan yahay.
Sida ku cad natiijooyinka horudhaca ah ee hordhaca ah, oo ay daabaceen Guddiga Madaxa Bannaan ee Doorashooyinka, oo ku saleysan tirinta 18% ee codbixiyaashu waxay xorayaashu horseedeen doorashadii 145 ka mid ah 338 degmo ee Kanada, marka la barbar dhigo 106 xisbiga Conservative Party.
Si aad ugu guuleysato aqlabiyadda Golaha Aqalka Sare ee Ottawa, ugu yaraan 170 kursi ayaa loo baahan yahay.
Gooni isu taaga Quebec waxaa lagu qiyaasaa in ay kaalinta sadexaad ka galeen doorashada oo leh 33 kursi, waxaa ku xigay xisbiga New Democratic Party (bidix), oo heysta 20.
Qiyaasayaashan ayaa la daabacay isla marka ay goobaha codbixinta laga xiro guud ahaan dalka oo ay ka kooban yihiin lix aag wakhti oo kala duwan.
Previous articleCanada .. Trudeau wins second term, although his party has lost the majority
Next articleDaawo:Gudoomiya wadani cabdiraxman ciro oo eedihii ugu kululaa u Jeediyey madaxweyne Muuse Biixi
Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo Cafis u fidiyay Maxaabiis...
Xisbiga Kulmiye oo Aqbalay Laba Musharax oo Bulshada Miisan ku Leh